🥇 ▷ WhatsApp ma tirtireyso faylasha loo diray iPhone haddii aan riixno "Delete for all" ✅
Markii wax ku dhacaan WhatsApp qaylo-dhaantu way dhammaataa, iyo inkasta oo waqtigan aan toos toos ula xiriirin asturnaanta, waa inaad taxaddar muujisaa tan iyo Appku ma tirtirayo faylasha loo diro Mobiles macruufka kadib riix Dhammaan tirtir.
Markan si sax ah ayaa loo ogaadey in, haddii aan haysanno iPhone oo aan ku helno faylal sida sawirro ah, tusaale ahaan, ka dibna go’aansato inaan “Tirtirno dhammaan”, sawirradaas waxay ku sii jiraan rug-yaraha sidii wax aan jirin.
Tani waxay leedahay asal aad u muhiim ah, maadaama Apple, shirkadda hal abuurka leh ee iPhone, uma oggolaanayo dalab kasta inuu galo marinka ogolaansho la’aan adeegsadaha.
Haddii aad leedahay ogolaanshahaas oo kale, iPhone waxay keydisaa feylasha ay ka heleen WhatsApp iyagoo adeegsanaya telefishinka. Tan waxaa lagu beddeli karaa goobaha, laakiin waxaa jira adeegsadeyaal iska indha tiraya xulashooyinkaas. Tani waa wax saameeya asturnaanta iyo sidoo kale xusuusta taleefanka gacanta.
Si kastaba ha noqotee, haddii sawir loo diro isticmaale Android ah (oo ka socda iPhone), halkan, “Delete for all”, haddii ay si sax ah u shaqeyso maadaama faylka tirtirey laga tirtiri doono moobiilka soo diro iyo kan qaataha moobiilka.
Laga soo bilaabo Android illaa Android, wax khalad ah ma jiraan, uguyaraan kuma jiraan muuqaalka “Delete for all” oo ay bixiso WhatsApp muddo ah 1 saac iyo 8 daqiiqo tan iyo markii sawirka la helay. Waqtigaan wuxuu ku eg yahay labada nidaam ee hawlgalka ah, taas oo ah, Android iyo macruufka.
Waxaa la rajeynayaa in cayayaankaan WhatsApp-ka ah lagu hagaajin doono cusboonaysiinta mustaqbalka, haddii kale, waxay ahaan doontaa mid aan wax saameyn ah yeelanin ka hor inta isticmaaleygu u baahdo inuu tirtiro mid, ama dhowr sawir oo leh ikhtiyaarka “Delete for all”.
Beddel barnaamijyada soo degsashada ee tooska ah ee WhatsApp ee macruufka
In kasta oo aan nidhaahno “for iOS”, sidoo kale, adeegsadayaasha Android way raaci karaan tillaabooyinka, maadaama aysan waxbadan ku kala duwanayn nidaam ka mid ah kan kale. Iyo, sida aan nidhaahno, waxay ku wanaagsan tahay asturnaanta iyo kaydinta moobiilka ee gudaha:
Fur barnaamijka WhatsApp oo guji ikhtiyaarka si Dejinta taasi waxay ka muuqataa qeybta hoose ee barta.
Marka gudaha menu aan dooranno “Xog iyo kaydinta”.
Halkan waxaan ku aragnaa feylasha lagu heli karo WhatsApp, haddii aan riixno mid kasta oo ka mid ah waxaan go’aan ka gaari karnaa haddii aan rabno iyaga in lagu soo dejisto oo keliya WiFi, oo kaliya leh xogta mobiilka, leh WiFi iyo xogta ama waligiis lama soo dejisan.
Iyada oo ku saleysan doorashada la sameeyay, waxaan heleynaa feylasha si iskood ah loogu soo dejiyo, ama ma ahan illaa aan ka dhajinno. Noqo sida ay suuragal tahay, mar haddii la soo dejiyo waxay si toos ah ugu tegi doonaan rugta iPhone illaa ay gacanta ka tirtiraan.
Ilaa inta cayayaanka la xalinaayo, marka aan tirtirno feylasha annaga oo isticmaaleyna “Delete for all” ikhtiyaariga WhatsApp, waxaan ku qasbanaan doonaa inaan tagno goobta sawirka isla markaana aan waliba ka saarno gacanta.
Via: Habar Jeega